トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM chakasimba nguva
Nepachinko muchina jackpot dzinokaroparuka dzose ROM zvakanaka. Kana Minukere simba chokutambudzika ROM, dzakanga mukana kuti givin ari jackpot. Saka, kana pane chepfungwa zvakanaka chokutambudzika ROM, uye ipapo muudzame tsananguro yako.
ROM ndiye simba, zviratidzo nyore yakarova jackpot chinobuda siyana. Zvikurukuru, kugadzirwa uye kusvika, edza kuisa pfungwa sei corners. Somuenzaniso, zviri kure uye kuita, zvakasiyana-siyana kugadzirwa uye kusvika zvichaita kana kakawanda nenzvimbo.
paminiti yamira kunyange zvishoma, iwe kana nekuputswa mavanga por yakavimbika iri kwakanyanya kupisa akavanzvenga. Uyezve, iwe nekusangana muedzo-shure munguva rutapudzo, etc. kana akasimudzira mu rwakapoteredza, ndinofunga kuti zvichava nesimba nguva.
Zvadaro, muna yakanaka nguva, kana chinowanzoitika kuitika zviri dzokukurukurirana Chang, zvakare mumwe simba nguva aibuda mukana kushanduka unouya kuramba kuti jackpot. Somuenzaniso, pane kurega nokuti haana kuuya kwevashandi mapfupi maawa kushanda, anenge 200 nokumukirana vanoedza kutamba nemoyo murefu.
asati kupererwa bhokisi, uyewo imi zvinhu zvakafanana zvinogona subtracted guru raparadza, ndinofunga kuti pane zvinhu waunowana. Uchiteverwa nokuyerera akanaka, hachisi muropa, kana pane chinhu chakadaro kuuya yakarova kunyange yakamisa pakarepo zvinotevera pa, pane mukana simba kumwedzi.
kumira vakadaro Mumagazini inofamba, zvichaita patafura kuti vava zvakakurumbira simba nguva, ndinofunga kuti ave nemaune kutamba wekuedza.
Zvadaro, muna nepachinko yokumusoro, pane dimikira iri mahwanda nhamba. womuenzaniso Iri sei uchava mufananidzo chidzoke tiende Akaroromesawo mutengi. Nokudaro nepachinko chitoro, uri iwe kana kunyange kuchinja zvipikiri kuchinja uye zvakafanana.
nepachinko yokumusoro divi, kana iwe handishanduki apo uwandu paradzanisa, nemiwo kuva mazuva mashoma yakanaka nguva iri akatevera. Strong chokutambudzika ROM ndicho chete chinhu kuti kunogona kuonekwawo pakarepo nokuridza mberi. Zvinoita, kana iwe tarisa, kunyanya mashoko girafu, zvichava nyore kunzwisisa mberi.
zvakanakisisa simba nehwaro date Angada here kuona ndiyo sefungu uwandu nokumukirana uye mutsetse girafu. Sezvo jackpot chinotevererwa, edza kusarudza chiduku tafura rotational kumhanya yezuva. Uye kuti, chikuva kuti inouya paminiti 200 majana vasati uye pashure rinotevera duku anomira muropa, ngatishonge mukana sefungu simba riri kuuya kusango maonero.
pashure inowanzotorwa nguva, zvakasimba kudoma muganhu kugumbuka-upenyu, saka zvakakosha kumisa panguva nguva anogona maximize purofiti pasina pfachura inivhesitimendi.
kana vanhuwo upenyu, kana kumhanya kuvhiringa upenyu zvinofanira zvafanotaurwa, somuenzaniso, panotaurwa kare mashoko. Zvino, sezvo zvakaoma kuona chete unhu tafura iwe vari kutamba, ngationei pamwe Data kuziva kubva kumaonero maviri.